Wasaarada Caafimaadka Galmudug oo wada Howlo Gar gaar oo ay ka fulineyso Gaalkacyo – SBC
Wasaarada Caafimaadka Galmudug oo wada Howlo Gar gaar oo ay ka fulineyso Gaalkacyo
Wasaarada caafimaadka Galmudug oo gargaar caafimaad gaarsiisay kaamka qaxootiga Ciise oo kuyaal magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug .
Deeqdani dawooyinkaa iyo dhaqaatiirta caafimaadka ayaa goobtaasi kafuliyay hoowlo caafimaad oo ay ku baarayaan cudurada dadkaasi ay la ildaran yihiin si ay ugu dabiibaan dawooyinka ay halkaasi gaarsiiyeen.
Kaamka qaxootiga Ciise ayaa ah kaam cusub oo ay ku sugan yihiin dad qaxootiyah oo kasoo barakacay koonfurta Soomaaliya, dad reer guuraa ah oo ay xoolihii kadhamaadeen iyo barkacayaashii kasoo qaxay dagaaladii kadhacay Qeybo ka mid ah magaalada Gaalkacyo kuwaasi tiradooduna ay gaareeyso ilaa 234 qooys oo aysan jirin wax gargaar ah oo soogaara sida ay cadeeysay gudoomiyaha kaamkaasi sahro shiiq ibraahin.
Gududoomiyaha kaamka bara kacyaasha Sahro Shiiq Ibraahin ayaa intaasi ku dartay ineey xaalada dad kaasi u muuqato mid marba marka kadanbeesa kasiidareeysa waxeeyna kacodsatay hay’adaha gargaarka ineey gacan bini aadanimo u fidiyaan si looga samata bixiyo arimaha adag ee dad kaasi heeysata.
Ugu danbeeyntii wasiir ku xigeenka wasaarada caafimaadka C/laahi Maxamad Xasan ayaa saxaafada u sheegay ineey sii wadidoonaa gargaarada ay u fidinayaan dadka dhibaateeysan ee cuduradu soo food saareen